खुसिको खबर:-समयमै अस्पताल पुग्दा हृदयघातबाट जोगिएँ : मदनकृष्ण श्रेष्ठ – ताजा समाचार
खुसिको खबर:-समयमै अस्पताल पुग्दा हृदयघातबाट जोगिएँ : मदनकृष्ण श्रेष्ठ
वरिष्ठ हास्यव्यंग्य कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ मुटुको उपचारपछि अहिले घरमा आराम गरिरहेका छन् । छातीको समस्या लिएर बिहिबार ग्राण्डी अस्पताल पुग्दा उनको मुटुको दुई भल्वमा ब्लकेज देखिएको थियो । दुई दिन अस्पताल बसेका श्रेष्ठको एन्जियोप्लास्टी प्रविधिबाट बिहीबार सफल उपचार गरिएको हो । अहिले आफ्नो स्वास्थ्यमा सुधार आएको श्रेष्ठले बताएका छन् ।
‘बिहान मर्निङ वाक गर्ने क्रममा छाती दुखेको महसुस भयो । श्रीमतीको समयमा उपचार हुन नसक्दाको पछुताउ सम्झेर म ढिलाई नगरी अस्पताल गएँ,’ उनले भने, ‘एक ठाउँमा ९९ प्रतिशत र अर्कोमा ९५ प्रतिशत ब्लकेज भइसकेको रहेछ ।’ अस्पताल पुग्न अलिकति ढिला गरेको भए हृदयघात भएर जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने डाक्टरहरुले उनलाई बताएका थिए ।
‘हृदयघात भए पनि उपचार त हुन्थ्यो होला, तर मुटु कमजोर हुने थियो । अहिले उपचारपछि मुटु पहिलेभन्दा पनि बलियो भयो,’ श्रेष्ठले भने । ग्राण्डी अस्पतालमा मुटुरोग विशेषज्ञ डा. ओममुर्ति अनिलले श्रेष्ठको उपचार गरेका थिए । उनलाई दुई हप्ताजति आराम गर्न भनिएको छ । श्रेष्ठ अहिले परिवारसँग समय बिताइरहेका छन् । आफू सामान्य अवस्थामा फर्किसकेको उनले बताए । श्रेष्ठकी पत्नी यसोदाको क्यान्सरका कारण ०७४ सालमा मृ*त्यु भएको थियो ।
‘रेपर’ समाउनु पर्नेमा ‘-यापर’ समात्दैछ सरकार ! अश्लिलता नियन्त्रण गर्ने सरकारको प्रयासलाई नराम्रो नमानी हालौं तर, ठूला ठूला मुद्धा चलिरहेको बेला गायक कलाकारहरुलाई समात्दै गीत डिलिट गर्न लगाउनुको कतै ठूलो मुद्धाबाट ध्यान मोड्ने प्रयास त भइरहेको छैन ? केही दिन अगाडि गायक तथा मोडल दुर्गेश थापा र आज भिटेनलाई नियन्त्रणमा लिएर उनीहरुलाई सोसल मिडिया युट्युवबाट हटाउन लगाएको बिषयमा थप कुरा जोड्न चाहन्छु ।
अ*श्लिल*ताको पक्षमा कदापी वकालत गर्दैनौं, ढुक्क हुनुस् । तर, सरकारले कलाकार छान्दै, गीत छान्दै नियन्त्रणमा लिएर युट्युवबाट डिलिट गर्न लगाउने हो भने, दैनिक कम्तीमा पनि १ जना समातिन्छन् । नीति चाँहि के हो ? त्यो पो थाहा हुनुप-यो ।
अनुपयुक्त सामग्री सरकारले नै युट्युबमा सेन्सर गर्नुप-यो, तर त्यो सासग्री गलत भए हटाउन सक्नुप-यो । मान्नुहोस् भिटेन नेपालमा बस्दैनन् रे । यदि उनले नेपाल बाहिर बसेर यो गीत अपलोड गरेको भए चाँहि ठीक थियो ? भिटेनलाई नभेटी त्यो अनुपयुक्त लागेको गीत सञ्चार मन्त्रालयले हटाउन सक्छ ?